Galatasaray oo la mamnuucay - CIYAARO.COM
Home / European Leagues / Galatasaray oo la mamnuucay	Galatasaray oo la mamnuucay
By Gamadiid Guurre	Updated: March 2, 2016	Tweet
Galatasaray ayaa laga mamnuucay tartamadda Yurub muddo hal sanno ah markii ay jabiyeen xeerka dhaqaalaha ee ciyaar wanaaga, sidaasi waxaa xaqiijiyay xiriirka kubadda cagta ee Uefa. Kooxdaan waxaa laga saari doonaa tartamadda Champions League ama Europa League haddii ay u soo baxaan sanadkaan ama kan soo socda.
Uefa waxey sheegtay bishii January in kooxda horyaalka Turkish-ka ay jabisay xeerarka heerka la ogolyahay in kooxi dhaqaale ku lumiso. Kooxda reer Istanbul waxey hadda horyaalka Super League kaga jirtaa kaalinta 5aad.
Related posts:Milan oo guuldaro lagu salaamay Messi oo Barca u xaqiijiyay hogaanka Wiilka Beckham oo Chelsea ka soo muuqdayShare/Bookmark	Galatasaraynew